Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Madaxweyne Kuxigeenkii Koonfurta Sudan oo Markale Xilka Laga Qaaday.
Madaxweyne kuxigeenka dalka Suudaanta Koonfureed ahaana hogaamiyaha Mucaaridka Riek Machar ayaa xilkii uu hayey laga xayuubiyey kadib markii lawaayey meel uu ku sugan yahay.
Riek Machar ayaa ka baxsaday magaalada caasimada Juba asbuucii lasoo dhaafay, iyadoo Madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir uu u qabtay illaa sabtidii lasoo dhaafay inuu dib ugu soo noqdo caasimada. Baxsashada Riek Machar ayaa imaaneysa kadib dagaaladii ka dhacay magaalada Juba bilowgii bishan aan kujiro ee dhexmaray ciidamadiisa iyo kuwa dowlada Salva Kiir.
Xisbiga Riek Machar ayaa iyagu sheegay inay magacaabeen ninka u buuxin doona xilka Madaxweyne Kuxigeenka oo ay u magacaabeen Jeneraal Taban Deng oo kamid ahaa gacan yarayaasha Riek Machar, isla markaana wax kasoo dhisay heshiiskii horey loo dhex dhigay mucaaridka iyo xukuumada.
Balse xil ka xayuubinta Riek Machar ayaa laga cabsi qabaa inay burbur ku keento heshiiskii sanadkii hore lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee u dhaxeeyey beelaha ay kasoo kala jeedaan Machar iyo Madaxweyne Salva Kii.